MT4 အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ - အပိုင်း 1 - ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
MT4 အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ - အပိုင်း ၁
သင့်အတွက် 'မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော' MT4 အင်္ဂါရပ်များ!
အဆိုပါ MT4 ပလပ်ဖောင်းသည် စျေးကွက်တွင် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပြီး အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။
MetaTrader4 ပလက်ဖောင်းသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် MetaQuotes Software မှတီထွင်ခဲ့ပြီးလက်လီရောင်းဝယ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောပထမဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့်လက်လီရောင်းဝယ်သူများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွင်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပွဲစားတိုင်းနီးပါးသည် MT2000 ကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းသည်။ သို့သော် MT4 ပလက်ဖောင်းသည်အလွန်လူကြိုက်များရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အခုမပေါ်လာပါဘူး။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော charting package တစ်ခုအနေဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်နှစ်များတစ်လျှောက်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး၊ စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ယခု MT4 platform သည်ကျယ်ပြန့်သောအင်္ဂါရပ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသော MT4 ပလက်ဖောင်းသည်လူကြိုက်များရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းမှာအလွန်ဖော်ရွေသော interface ရှိ၍ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းသည်နေရာအားလုံး၌မှန်ကန်သောအရာများရှိသည်။ စင်မြင့်မှာရှိတဲ့အပိုင်းကိုယူပြီးအလယ်ဗဟိုမှာဇယားအပိုင်းရှိတယ်။ ပလက်ဖောင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်အညွှန်းကိန်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သင်အလုပ်အများဆုံးလုပ်မည့်နေရာဖြစ်သောကြောင့်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသေတ္တာရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ငွေကြေးအတွဲများဖြင့်စတင်ပြီး၊ နောက်တွင် equity၊ အဖိုးတန်သတ္တုများစသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ အောက်တွင်သင်၏အကောင့်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများရှိ Navigator box တစ်ခုရှိသည်။ အောက်ခြေတွင်ကဏ္ ten ၁၀ ခုထက်ပိုသော terminal ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာ -
ကုန်သွယ်မှု- အဖွင့်နှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောကုန်သွယ်မှုများကို ပြသသည့်နေရာ၊
သင်ပလက်ဖောင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းများကိုလည်းပတ်ပတ်လည်တွင်ပြောင်း။ ရွှေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်အရာအားလုံးကိုပြီးပြည့်စုံသောအစီအစဉ်တွင်ထားသောအခါအဘယ်ကြောင့်ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ အချို့က MT4 သည်ရင်းနှီးဖော်ရွေသောအရာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိမှန်ကန်နိုင်သော်လည်းအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ပုံမှန်ဗားရှင်းရှိ MT4 ပလက်ဖောင်း၏ပြတင်းပေါက်အားလုံး။
အကောင့်မျိုးစုံ - MT4 သည်အကောင့်မျိုးစုံကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အချို့သူများအတွက်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုတစ်ခုမဖြစ်နိူင်သော်လည်းကုန်သည်များအတွက်ဤသည်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရသောတူညီသောပွဲစားနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ရိုက်အကောင့်နှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်ပုံမှန်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ နောက်တစ်ခုမှာငါမဟာဗျူဟာအသစ်များ၊ မတူညီသောအညွှန်းများနှင့် setups အသစ်များကိုကြိုးစားအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသော mini-account တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသရုပ်ပြအကောင့်အတွက်နည်းဗျူဟာအသစ်တွေသုံးပြီးလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သရုပ်ပြအရောင်းအဝယ်ကကုန်သွယ်ရေးနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မနီးဘူး။ ဒါကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်ရင်သင်တိုက်ရိုက်အကောင့်မှာစမ်းကြည့်ရမယ်။ သို့သော်အကောင့်မျိုးစုံကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုတွင်ကုန်သွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပဲအလွန်အဆင်မပြေပါ။ အခြားအကောင့်နှင့် log in လုပ်ရန်သင်ပလက်ဖောင်းကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ရမည်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်လုပ်ငန်းစဉ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်သည်။
automated ကုန်သွယ် - ဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အလွန်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာသည်။ ကုန်သည်များစွာသည်စက်ရုပ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများ (EAs) ကို ၄ င်းတို့၏ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုကိုလက်ခံရန်အသုံးပြုကြသည်။ MT4 သည်အလိုအလျောက် / algorithmic အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့တန်းမှပါ။ ကုန်သည်များနှင့် developer များအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လွယ်ကူသောအလွန်ရင်းနှီးဖော်ရွေသော MQL ပရိုဂရမ်များရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ အလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်များကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်လွယ်ကူခြင်းသည် MT4 ဤမျှလူကြိုက်များရသည့်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ platform သည်သင်၏ automated trading program ကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုထားသော MQL4 IDE (Integrated Development Environment) ကိုအသုံးပြုသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်အစီအစဉ်တစ်ခုကို ၀ ယ ်၍ ၎င်းကိုပလက်ဖောင်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အရောင်းစက်ရုပ်များကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ MT4 တွင်ပါ ၀ င်သော debugger ပါရှိပြီး၎င်းသည် ၀ ယ်ထားသောပရိုဂရမ်များပါ ၀ င်သည်။ သင်ဝယ်ယူနေသည့်သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပရိုဂရမ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကို MT4 ရှိသမိုင်းဇယားများတွင်အသုံးချပြီးရလဒ်များကိုရရှိနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်သည်အစစ်အမှန်စျေးကွက်အခြေအနေများတွင်အမှန်တကယ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းစမ်းသပ်ရန်အန worked တရာယ်မရှိဘဲအမှန်တကယ်စျေးကွက်အခြေအနေတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းရှိ၊
MQL4 အသိုင်းအဝိုင်း - TradeO နှင့် eToro ကဲ့သို့သောလူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပွဲစားများကအခြားအောင်မြင်သောကုန်သည်များနောက်သို့လိုက်နိုင်သည့်ပွဲစားအချို့ရှိကြသည်၊ သို့သော် MQL4 အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နီးစပ်မှုတစ်ခုမှမရှိ။ MQL4 အသိုင်းအဝိုင်းသည်ပွဲစားများအားလုံးမှကုန်သည်များနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်အချက်ပြမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစျေးကွက်နှင့်တူသည်။ မည်သည့်ပွဲစားသည်သင်၏အကောင့်နှင့်ဝင်သည်ဖြစ်စေသင်သည် MT4 ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုနေပါကသင်သည် MQL4 အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင် MQL4 ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်း၏အောက်ခြေရှိအချက်ပြကဏ္ section ကိုဖွင့ ်၍၊ သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီးနောက်မည်သည့်ကုန်သည်သည်လိုက်နာရမည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ MQL4 အသိုင်းအဝိုင်းမှပေးသောနောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်ပြများကိုရောင်းချနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကအချက်ပြရောင်းချသူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသင်၏ရပ်ကွက်ရှိအခြားသူများကသင်၏လစဉ်မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုပေးလိမ့်မည်။ နောက်မှသူတို့သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုများကို၎င်းတို့၏အကောင့်များပေါ်တွင် MT4 ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကူးယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ညွှန်းကိန်းများစွာ - MetaTrader ပလက်ဖောင်းသည်လက်လီအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်း built-in ညွှန်းကိန်းအရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ MT15 ပလက်ဖောင်းနှင့်လွတ်လပ်သောလာသည့်အညွှန်းကိန်းများ - ရွေ့လျားသည့် Averages, Stochastic, Trendline, Fibonacci, RSI, Ichimoku စသည်တို့ကဲ့သို့သောအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပါးသော Envelopes၊ Money Flow Index, Accelerator Oscillator စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာအွန်လိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်မှုသည်ရှည်လျားသောလမ်းဖြစ်လာသည်။ ယခုခေတ်တွင်အညွှန်းပံ့ပိုးသူအမြောက်အမြားရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အများစုကို ၀ ယ်ယူသောအခါရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုစင်မြင့်ပေါ်သို့ကူးယူပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အတွေ့အကြုံမှပြောရလျှင် MT4 ညွှန်းကိန်းများသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးနားလည်ရလွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုလည်းခံရသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားမွမ်းမံမှုနှင့်အသစ်တင်ရန်အခက်အခဲကိုသက်သာစေသည်။ MT4 ညွှန်းကိန်းများကိုအမျိုးအစား ၅ ခုခွဲထားသည်။
လမ်းကြောင်း- Ichimoku၊ Bollinger Bands၊ Moving Averages စသည်တို့ကဲ့သို့ လမ်းကြောင်းသစ်ကို ညွှန်ပြသော အညွှန်းကိန်းများ။
Oscillators- MACD၊ Stochastic၊ RSI စသည်ဖြင့် အဝယ်လွန်နေသည့် အရောင်းအ၀ယ်အဆင့်များအကြား စျေးနှုန်းတုန်လှုပ်မှုကို ညွှန်ပြသော အညွှန်းကိန်းများ။
အတွဲများ- စုဆောင်းမှု/ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အတွဲများ၊ ငွေစီးဆင်းမှုအညွှန်းကိန်း စသည်တို့ကဲ့သို့သော အဝယ် သို့မဟုတ် ရောင်းချမှုပမာဏများကို ညွှန်ပြခြင်း။
Bill Williams- Alligator၊ Market Facilitation Index စသည်ဖြင့် ရောနှောထားသော အညွှန်းများ
စိတ်ကြိုက်- အထက်ဖော်ပြပါ အညွှန်းများအားလုံးနှင့် ATR၊ CCI၊ Parabolic၊ ZigZag အစရှိသည့် အခြားအရာများ
စမတ်ဖုန်းအတွက်အဆင်ပြေအောင် - ကုန်သည်များအနေဖြင့်မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုပေါ် မူတည်၍ မတူညီသောကဏ္ aspects အမျိုးမျိုးကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက် MT4 ၏မိုဘိုင်းကုန်သွယ်မှုအသွင်အပြင်သည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့တာကုန်သည် ဖြစ်၍ စျေးကွက်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ MT4 မိုဘိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်မရှိရင်တစ်နေ့လုံးကျွန်တော့်ရုံးခန်းမှာမျက်နှာပြင်ရှေ့မှာထိုင်လိမ့်မယ်။ MT4 မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းမှစျေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး၊ မိုဘိုင်းဗားရှင်းသည် PC ဗားရှင်းနှင့်လုံးဝမတူပါ၊ သို့သော် PC-based platform အများစု၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများနှင့်ညွှန်းကိန်း ၆၀ ကျော်ရှိသည်။ သတင်းအချက်ပေးမှုများ၊ အချက်ပြမှုများနှင့် MetaTrader စျေးကွက်ကို ဝင်ရောက်၍ ညွှန်ကိန်းများနှင့်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) များကို ၀ ယ်ပြီးမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ရပ်တန့်ရောင်းရောင်းကန့်သတ်ဝယ် / ရောင်းနှင့်ရပ်တန့်န့်သတ်ဝယ် / ရောင်း။
အဲဒါတွေကို MT4 ရဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်တွေအဖြစ်ငါစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်။ အကောင့်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုသည်ကွဲပြားသောနည်းဗျူဟာများကိုကျင့်သုံးရန်သင့်အားအကောင့်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ MQL4 IDE သည်အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းစေသည်။ စမတ်ဖုန်း application သည်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ညွှန်ကိန်းများသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ MQL4 အသိုင်းအဝိုင်းသည်သင့်အားအခြားအောင်မြင်သောကုန်သည်များနောက်လိုက်ရန်နှင့်သင်၏အချက်ပြမှုများကိုရောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။ အခြားကုန်သည်များကမတူညီသော ဦး စားပေးမှုများရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအင်္ဂါရပ်များသည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Trading Platforms ကို ကြည့်ရှုပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း.
Last Updated: မေလ 23rd, 2022